Home News Xildhibaanada Taageersan Madaxweyne Farmaajo oo la ogaaday Sedax qeeyb oo ay kala...
Xildhibaanada Taageersan Madaxweyne Farmaajo oo la ogaaday Sedax qeeyb oo ay kala yihiin
Shalay waxaa muqdisho ku kulmay xildhibaano la sheegay In ay taageersanaayeen Madaxweynaha dowlada federaalka ah ee soomaaliya kuwaasi oo xitaa isku qabtay hotelkii ay ku shirayeen sida laga arkayo muuqaalo lagu faafiyay baraha bulshada.
Hadaba MOL ayaa si cad u ogatay in Xildhibaanadaasi oo xitaa laga been sheegay tiradooda ay aad uga yaraayeen mid la shaaciyay oo aysan gaareeynin.
Sidoo kale waxaan soo ogaanay Xildhibaanada taageersan farmaajo sedaxda dhinac ee ay kala yihiin,waxaana ay u badan yihiin Wasiirada kuwaasi oo kuraastooda ilaashanaayo.
Wasiir ilaalashanaayo Kursigga,Xildhibaan ku reer ah Madaxweynaha ama R/wasaaraha iyo Koox yar oo ku hees la dhaho kuwaasi oo u qeeyliyo hadba qolyahii lacag siiya.
Xildhibaanadaasi ayaa waxaa ay noqdeen kuwa gebay masiirkoodii islamarkaana sharaftooda shilin iyo xil uun dhaafsaday
Previous articleMaxaad ogeeyn oo saakay ka socda Degmada Bulla-burde Ee Gobolka Hiiraan
Next articleBeesha Caalamka iyo Igad oo isku raacay in lasii daayo Muqtaar Rooboow iyo Farmaajo oo ka naxsan!!
Somali-land oo u Hanjabtay Ciidamo iyo Askar u Goosatay Dhanka Puntland